Silo | February 2020
Editor Ee Doorashada February 23,2020
Ugu Weyn Ee Silo
Si lo'du si fiican u daajiso oo aan si weyn u yareeyn waxsoosaarkooda xilliga jiilaalka, waxaa lagama maarmaan ah in ay daryeesho diyaarin ku filan oo ah quudin hore. Qayb muhiim ah oo cuntooyinka xayawaanka ah waa cuntooyin casri ah, taas oo ah, kuwa ay ku jiraan xaddi badan oo biyo ah. Si ay u noqdaan kuwo nafaqo leh oo faa'iido leh sida ugu macquulsan, waa lagama maarmaan in la adkeeyo tiknoolajiyada diyaarinta iyo kaydinta.
Raadi aqallada lagu koriyo oo lagu koriyo - yaanyo "Gulliver" oo ka yimi dalka yaanyada
Ehmeya striped: qarsoodi ah beerashada guuleysta guriga
Goorma ayaa ah wakhtiga ugu wanaagsan ee lagu beerayo baradhada iyadoo la raacayo jadwalka Dayaxa
Ruushka madow ee la garaacay (galan): hilibka iyo ukunta oo ah digaag
Sida loola tacaalo dhammaan noocyada dhibaatooyinka clerodendrum sii kordhaya: sababaha iyo daaweynta
Geranium - picky roogaga leh barxad leh dhalaalaya dhalaalaya oo badan. Laakiin xitaa beauty this ee aan qabyo ahayn ee daryeelka ayaa si lama filaan ah u bilaabi karaan inay ka tagaan. Xaaladdan, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado sababta cudurku wakhtigeeda u qaato oo loo qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah dib udhiska dhaqanka kulaylaha. Maqaalkani waxaan si faahfaahsan uga hadli doonaa sababta dhibaatadani u soo bixi karto. Read More
Aruurinta Aralia Manchu
Daryeelka Apple: dhan oo ku saabsan manjooyin sax ah guga iyo dayrta
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Silo 2020